बिहे नगरी बा बन्न चाहिँ पाउने कि नपाउने ? – Himal Post | Online News Revolution
himal post २०७५, २२ जेष्ठ १९:०३ June 5, 2018
अझ बिहे नगरी आमा बन्न सकिने कुराले त कानुनी रूप पाउँदै छ । तर, बिहे नगरी बाउ बन्न पाउने नपाउने कुरा चलनमै भरपर्नुपर्ने स्थिति छ । खासमा बिहे केका लागि ? बच्चा केका लागि ? यौन केका लागि ? यसबारे हाम्रो सोचाई स्पष्ट नहुँदा समस्या आउने खतरा छ । एउटासँग बिहे गर्ने बच्चा अर्कैको जन्माउने, एउटाको बच्चा जन्माउने, ऊसँग बिहे नगर्ने, एउटासँग यौनसम्बन्ध मात्रै राख्नेः बिहे पनि नगर्ने, बच्चा पनि नजन्माउने । क्या रोचक हुन्छ । किनकि, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार न हो । हो, एउटा बहसको सुरुवात मात्रै हो । योसँग जोडिर थुप्रै विषयहरू सतहमा आउन जरुरी छ ।
प्रकाश दाहालको स्मृतिमा स्तम्भ निर्माण गरिने